Uma sikhuluma izithakazelo zabesifazane, owokuqala efika engqondweni yakho, yebo, ukuyothenga. Kodwa ngaphandle kwalokhu, kukhona Namanje ijezi, efekethisiwe, Decoupage, ibhuku elethusayo, ukubhaka amakhekhe lokuthunga amathoyizi esithambile. Ngokuqondene namadoda, phakathi izithakazelo zabo owaziwa ethandwa kakhulu okugeza, ukudoba, ibhola, ukuzingela ... Kodwa lokhu bonke?
Ingabe izigidi zabantu emhlabeni dream kuphela mayelana nendlela yokusebenzisa spare time sakho ukudlala ibhola noma inhlanzi kusukela emfuleni ambalwa izinhlanzi ezinkulu? Namuhla bese uzama ukubhekana ukuthi, yiziphi izithakazelo zabantu.
Yiqiniso, izinketho - imoto encane kanye neloli. Phela, amadoda zihlukile - ngamunye inencasa yayo, ubuntu, ukuthambekela nemikhuba. Ayavumelana yinto eyodwa - uthando kumelwe nakanjani kumele angamaduna ngalinye. Kuyasiza ukuphazamisa ezinkathazweni nezinkinga zasekhaya emsebenzini, kunikeza ithuba uphumule futhi uzizwe sengathi ubuntu agcwele, kunikeza ajabule futhi ikunika ithuba ukufeza okuthile okuhle kuwe.
Ngakho-ke, noma kunjalo yini ukuvumela umuntu umsebenzi ngesenzo bathandekayo, ngokuphambene nalokho, kufanele bakhuthazwe ukuba adumise, futhi ukubuya kwakhe ngizokubuyisela ngothando nangenhlonipho. Ngaphezu kwalokho, uma umyeni eziyigugu, ayikatholakali kuze lunqunywe lo mkhuba, kubalulekile ukuba ayisize. Futhi ubani owazi - mhlawumbe ngokunembile lesi sihloko futhi uhlangabezana abanye imicabango abaphendula ngokunengqondo.
Phakathi kakhulu, mhlawumbe, wokuzilibazisa othandwa ngoba amadoda - yebo, izimoto izithuthuthu. Uma umfana waba nenhlanhla, futhi ine imoto yakhe, kungaba ngentshiseko ukuchitha eduze umngane edonsa ngawo wonke amasondo lonke kusihlwa noma ngisho usuku. Cishe Abesifazane abaningi nakancane ukuthi wayelapho isikhathi eside kangaka bekulokhu - efana imoto Kulungile, ngakho yini engenziwa egalaji emahoreni ambalwa? Oh ... kholwa yimi, amacala emphinjeni. Ingaphakathi Clean, uthule uthuli kusuka kudeshibhodi kuze nachernyat iraba kukhanye ecwebezelayo, isibambo kusho antirain ingilazi, isibambo otpolirovyvat - ngokuvamile, akunamkhawulo ekupheleleni.
umshayeli zapravskogo okunjalo, ngokuqinisekile, kukhona yonke armful izifiso, futhi umlingani kungaba abonise ukuthi uyavumelana uthando lwakhe, wanika nomyeni wakhe lo ayesifuna ngabomvu amazwe sula ezibizayo, cleaner wezindlu zangaphakathi endlini, imoto compressor, emoyeni ionizer noma ezinye iyigugu enhliziyweni yakhe avtobezdelushku. Futhi bese ubuka njengoba ingane umyeni bajabula odlula egalaji ukunamathisela Thing entsha.
Nokho, ngisho noma uthenga imoto ibhajethi umndeni ayikahlanganiswa enikeziwe, umyeni angase ukuqoqa kahle zezimoto - okuhle, isinqumo omkhulu manje, futhi ababukeka esonta imoto yekudlala ngezinye izikhathi akuyona kunabayeni into yangempela. Kuyinto okwamanje ikhaya wokuzilibazisa ngoba amadoda, akukho okungcono futhi akukho okubi kakhulu ukwedlula abanye. Ngaphezu kwalokho, kwenza kubelula kukhethwa isipho for a holiday - ungahlala ukwethula bakho omunye "Honda" futhi "Toyota."
Omunye umdlalo ovamile for amadoda - zonke izinhlobo ezemidlalo. Akunjalo ngempela football, kungaba Paintball, ukuyodlala i-bowling, amabhiliyade, ngebhayisikili noma rollerblading, i-snowboarding, Ukushushuluza, scuba diving ... Le yokuchitha isizungu asebenzayo ikuvumela ukuba hhayi kuphela uzigcine isesimweni, kodwa futhi ukuqeda amandla negative zanqwabelana phakathi kweveke yokusebenza , ukunciphisa ukucindezeleka, abangane abasha futhi eze ekhaya ajabule. Ngaphezu kwalokho womshado unamandla ngokugcwele ukuthi lenze yiloba yikuphi lezi zinhlobo ezilandelayo ukuphumula Ukwakha iqoqo ozithandayo.
Ngokushesha kuyoba izihloko ezengeziwe ezivamile ingxoxo, kuzoba izingxabano phezu ukuthi, kanjani futhi kuphi ukuchitha okukhipha olulodwa. Nokho, ngesikhathi esifanayo kungaba unobtrusively ukuqapha, hhayi kakhulu kulo mdlalo uthole-ndawonye abangashadile amantombazane emide emincane, ivulekele ubudlelwano.
Omunye umdlalo engavamile futhi ezithakazelisayo amadoda - ngenalithi. Ngokwemvelo, asikhulumi mayelana nokwenza namakarada ngezandla futhi Stitch esiphambanweni.
umfana banamuhla bangasebenzisa ahileleke aeromodelling, ukhuni ekuqopheni amatshe oqoshiwe, evutha, yokukhiqiza of amabhokisi, yezandla likamentshisi futhi amabhodlela, nokunye. Nakuba ngezinye izikhathi lwaya iphenduka ibe indlela ukuhola imali ethe xaxa ukuthi kuba nemiphumela emihle zokuzisiza bezibona indoda njengoba kuba yibona, futhi isabelomali jikelele umndeni.
Isikhathi esining impela njengendlela yokuzilibazisa for amadoda umi lokuqoqa. Lapha, umcabango besilisa Alinamkhawulo - sha, ubhiya izibuko, efrijini odonsa, amathikithi football midlalo, uhlamvu lwemali ... Into esemqoka ukuthi indlu zingene zonke lezi Trophies eziyigugu.
Kufanele futhi ishiwo lo msebenzi ngoba bantu, njengezilwane isithombe. Muva, uyawuthanda cishe ingxenye eyodwa kwezintathu.
Lo msebenzi ikuvumela ukuveza ngobuhlakani bakho, izinga immortalized albhamu umndeni amaholide kanye zokuzalwa, futhi ngezinye izikhathi ikuvumela ukuba imali ethe xaxa.
Ngokuvamile, njengoba isisho, lokho obungenza umfana noma teshilsya, nje hhayi alimaze izithakazelo umndeni. Vumela ukuthola wokuzilibazisa umphefumulo futhi uzinika kuye isikhathi sakhe mahhala - konke lokhu ngeke nje kuphela kukuzuzise.
Futha isibhamu "uNdunankulu" - izindlela eziphumelelayo isivikelo ekuhlaseleni
Baryshev Machine: Ukucaciswa (ifotho)
Umuthi 'Cavintonum Forte "
Nweba jeans: ezihlukahlukene imifanekiso. imithetho Ukukhetha
Ukudla okunomsoco - Iyini? Basics of okunomsoco